Kadikoy Tavsantepe Metro Times | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulKadikoy Tavsantepe Subway Times
17 / 11 / 2019 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY
Kadikoy Tavşantepe Tareenka Waddada Waddada
Saacadaha Tareenka ee Kadıköy Tavşantepe: 1 ee khadka. marxaladda ayaa lagu dhammeeyay 2012 waxaana loo furay adeegga iyadoo la adeegsanayo xarunta 21,7 ee qaybta 16 km ee u dhaxaysa Kadıköy iyo Kartal. Iyadoo la raacayo dhismaha Yakacık-Adnan Kahveci, Pendik iyo Tavşantepe, 2. masraxa waa la soo gabagabeeyey. 2. Dhererka xariiqda ayaa korodhay ilaa 26,5 km tirada saldhigyadaana waxay ku kordhay 19. Waqtiga celceliska orodka safku waa daqiiqadaha 82.
Khadku wuxuu ku fadhiyaa wadada D100 ee gobolka Acıbadem wuxuuna ka bilaabmayaa Kadıköy wuxuuna raacaa wadadan ilaa Tavşantepe. Waxaa jira gaari 52 ah (tareenka 13) bakhaarro iyo aqoon isweydaarsi dayactir wata oo leh wadarta guud ee awooda gawaarida 32 qadka u dhexeeya saldhigyada Maltepe iyo Huzurevi iyo aagga Saldhigga Maltepe. Khad dhan, oo ay ku jiraan bakhaarro iyo goobo aqoon isweydaarsi, ayaa lagu dhisay dhulka hoostiisa.
Sabah 06.00ilaa metrooga magaalada Istanbul 24.00 ilaa waqtigu sii socdo. 4 kasta wuxuu badbaadiyaa waqtiga rakaabka isagoo leh hal safar daqiiqaddii.
Qaabdhismeedka Saldhigga metrooga ee Kadıköy Tavşantepe
Khadadka qadka waxaa ka mid ah TBM inta u dhaxaysa Kadıköy - Kozyatağı iyo Kartal - Kaynarca; Waxaa qodaya habka NATM ee u dhexeeya Kozyatağı - Kartal. Saldhigga Bostanci wuxuu leeyahay khadka tareenka oo dheeri ah iyo laba meelood oo dhinac ah iyagoo tixgelinaya baahida loo qabo hawlgal kale. Saldhigyada kale oo dhan waxay u dhisnaayeen qaabab dhinac ah. Dhererka saldhigga waa mitirrada 180 oo ku habboon shaqada tareenka oo leh 8. Waxaa jira baxsadyo 259 ah iyo wiishash sare oo ah 70 xarunta. Gaaritaanka waxaa bixiya 30 Turnstile, oo loogu talagalay in lagu oggolaado marinka rakaabka naafada ah.
NABAD ISTICMAALKA IYO AMMAANKA
Qiiqa iyo muuqaallada daadgureynta rakaabka ayaa loo diyaariyay ka soo horjeedka xaaladaha xun ee laga yaabo inay ka dhacaan Khadka Tareenka ee Kadıköy Tavşantepe waxaana la tijaabiyay miiqyo la xiriira muuqaalladaas. Isugeynta kamaradaha 991 ee saldhigyada, nidaamka ayaa si joogto ah ula socda, kontaroola una kormeera ilaalada amniga.
Calaamadda xariijinta iyo aagga kaydinta waxay leedahay nidaam isgaarsiineed oo ku saleysan nidaamka loo yaqaan 'Mobile Block'. Nidaamka saxeexa waa Thales CBTC nidaamka tareenadu waxay leeyihiin baarkin la'aan.
Dhammaan qalabka loo isticmaalo dhismaha xadka ayaa laga soo xushay qalabka kuleylka kuleylka kuleylka oo aan ka soo bixin gaasaska sunta ah. Si loo hubiyo ka bixidda rakaabka wakhti gaaban oo ammaan ah haddii ay dhacdo dab; Hawlgallada si toos ah oo toos ah, gaar ahaan shuruudaha u hoggaansamida NFPA, kumbuyuutarka xakamaynta iyo nidaamka daad-gureynta ayaa la heli karaa.
Khadka tareenka ee 'Kadıköy Tavşantepe Metro Line', sahayda tamarta ee nidaamka oo dhan waxaa laga fuliyaa qodobbada 3 gooni ah. Hadday dhammaan saddexda qaybood ee sahaydu keenaan, matoorrada ku yaal barta gaarka ah ee 2 waa la shaqeynayaa. Iyada oo la shaqeynayo matoorrada korantada, dhammaan tareennada tunnel waxaa la geeyay saldhigga ugu dhow rakaabkana waa la daadgureeyaa. Haddii ay dhacdo in tamar la'aan iyo koronto-dhaliyeyaasha ay ku guul darreysato; Nidaamka iftiinka iyo nidaamyada xakameynta elektaroonigga ah waxaa lagu awoodsiin karaa sahayda koronto ee aan la goosan karin saacadaha 3.
Kadikoy Tavsantepe Metro Stations Saldhigyada
T3 Kadikoy - Mashruuca Tram Line, basaska magaalada, basaska badda iyo maraakiibta badda ee Xarunta Kadikoy,
Hawlgalka Maraakiibta Maraakiibta,
Hawlgalka Metrobus ee Xarunta Calaamadsan,
Xarunta Pendik Station, waxay u wareejineysaa basaska IETT ee saldhiga Pendik High Speed ​​Station.
Khariidadda Kadikoy Tavsantepe Metro
Khadadka Kartal-Pendik-Tavşantepe ayaa la furay
Khamiis-Yakacik-Pendik-Tavşantepe Line ayaa la furay berri
Waqtigee ayaa ah xafladdii furitaanka ee Saldhigga Dhexe ee Tavsantepe maanta
Khadka Telefoonka Kartal-Yakacik-Pendik-Tavşantepe ayaa la furay
Maanta taariikhda: 10 Oktoobar 2016 Kartal-Pendik-Tavşantepe Metro ...
Maanta taariikhda: 21 Janaayo 2017 Kartal-Yakacık-Pendik-Tavşantepe Metro ...
Sabiha Gökçen Tavşantepe Tareenka
Goorma Sabiha Gökçen Tavşantepe Metro Line la furi doonaa?
Kadikoy Kartal Metro ma shaqeyneysa Kadikoy, laakiin E-5
Waqooyiga Kadikoy-Tavşantepe Waqti
Taikikada-Kadekoy-Tavşantepe Taariiqda furitaanka